Angawoonni Ameerikaa Akeekkachiisa Vaayiresii Koornaa Maal Na Dhibdeen Bira Darban: Kanneen Odeeffannoo Himataa Dhiyeessan
Hayyuun saayinisii gameessi kan mootummaa Yunaayitid Isteetis tokko angawoonni COVID 19tti duuluuf wixinee saayinsiin qoratame dhiyeessuu kootiin narratti fuuleffatan jechuun komee dhiyeessan ilaalchisee kongresii duratti dhiyaachuun dhaga ba’umsa kennuuf jiru.
Miseensi mana maree bakka bu’ootaa Anna Eshoo akka jedhanitti komee Dr. Rick Bright dhieessan mootumman Tramp weerara vaayiresii koronaaf deebii kennuuf akka inni itti hojjete yaaddoo guddaa uumuu isaa kan ibsu yoo ta’u, ministeera tajaajila eegumsa fayyaa Alex Azaar fi itti aanaa ministeera dursanii qophaa’uu fi deebii kennuu Roobert Kaadlek biraas dhug ba’umsa dhaga’uu akka barbaadan ibsan.
Himannaan dhiyaate sun bulchiinsichi ennaa weerara kanaa fayyummaa lammiiwwan Ameerikaa eeguu irra namoota dhuunfaaf baabsuuf falmuufii durse jedha. Himannaan Dr. Braayits xiinxalamuutu irra jiraata jejdhan Eshoo-n.
Braayit akka jedhaniyyi Kaadleek kutaan isanii kan qorannaa dawaalee geggeessu, dawaa saayinisiin hin mirkanoofne kan akka hydroxychloroquine jedhamu irratti maallaqi akka ba’u dhiibbaa na irra kaa’an jedhan.
Dr. Braayit uummata dawaa summii keemikaalaa qabu kan tajaajilli eegumsa fayyaa dhiibbaa prezidaant Traampiin wal’aansaaf amansiisaa akka ta’etti hime uummataaf akka hin dhiyaanne ittisuuf humna akka hin qabaannetu natti dhaga’ama jedhan jedha himannaan sun. innumaa iyyuu lammiiwwan ameerikaa dawaa dhukkubsattoota COVID-19 gargaaruu isaaf ragaa saayinsii ga’aan hin deggeramne irratti odeeffannoo akka argatan na ariifachiisan jedhan.
Hayyoonni VOAf akka ibsanitti vaayiresii koronaaaf wal’aansa arguun saayinsii irratti hundaa’uu qabaa dawaan argames yaalii kilinikaa keessa ka darbuuf sababaa qaba jedhu.
Tajaajilli eegumsa fayyaa Ameerikaa Dr. Braayit weerarri kun utuma hin faca’in jalqabarratti daddaaffii dhaan talaallii qopheessuu, maaskii, ventileeterii fi meeshaaleen qorannoo ittiin geggeessan irratti investii akka ta’u dhiibbaa gochuu isaaniif angawootaan qeeqi irratti dhiyaate jedha himannaan odeeffannoo ba’ee kun.